Ampidino WonderFox Photo Watermark 1.1 ho an'ny Windows
Ampidino WonderFox Photo Watermark
Sehatra: Windows Version: 1.1 Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (7.75 MB)
Ampidino WonderFox Photo Watermark, Tondraho aminny fatiantoka kalitao zero ny sarinao. WonderFox Photo Watermark dia programa iray izay azonao ampiasaina hanampiana fikajiana rano aminny sary aminny solosainao Windows. Miresaka fandaharana lehibe iray aho izay manolotra loharano mari-drano maimaimpoana mihoatra ny 150, fanohanana ireo mari-drano an-tsary sy an-tsoratra, modely efa voaomana, fitaovana fanovana, fanovana endrika ary maro hafa.
Afaka manao ny asanao haingana aminny programa WonderFox Photo Watermark ianao .Na dia tsy manome fanohanana aminny fiteny Tiorka aza izy io, maharitra segondra vitsy vao afaka manampy mari-drano aminilay sary noho ny interface-friendly-ny mpampiasa. Icon, avatar, logo anny orinasa sns ary koa ny anaranao, sonia ary teny rehetra.Azonao atao koa ny manampy azy eo aminny zoronny sarinao araka ny itiavanao azy. Vao mainka tsara tarehy; Azonao atao ny mampihatra ny mari-drano aminny sary mihoatra ny iray indray mandeha.
Raha mila miresaka momba ny endri-javatra miavaka aminny programa watermark aho, izay misy asa fanovana sary mandaitra ihany koa:
Arovy ny sarinao miaraka amina fitaovana mari-drano 150 mahery (sary, soratra, sonia ary maro hafa).
Mora ny manao asa fanitsiana sary toy ny cropping, manova ny habeny, manome anarana.
Avadiho aminny endrika tianao ny sary.
Manampia mari-drano maromaro aminny sarinao. (Tsy haharitra afa-tsy 1 minitra ianao hametrahana watermark sary 100)
WonderFox Photo Watermark Specs
Haben'ny rakitra: 7.75 MB